Manomboka tonga ao amin'ny iOS |. Ny mpanampy virtoaly Spotify Vaovao IPhone
Ignacio Sala | 08/04/2021 16:00 | Fampiharana iPhone, About us
Raha tsy manana mpanampy virtoaly ampy amin'ny iPhone izahay, ho an'ny Siri, Alexa ary Google Assistant dia mila manampy iray vaovao izahay, ilay omen'ny Spotify anay ao anatin'ny fampiharana azy. Nanomboka ny orinasa soedoà Spotify manapaha andraikitra vaovao amin'ny endrika mpanampy virtoaly izay mamela antsika hifandray amin'ny fampiharana amin'ny alàlan'ny baikon'ny feo.
Amin'ny maha mpanampy amin'ny fampiharana mozika anao, ny hany zavatra azonay atao dia ny mangataka aminao milalao hira, lisitry ny playlist, rakikira manokana… Raha mbola eo amin'ny efijery ilay fampiharana. Araka ny voalaza avy GSM Arena Io endri-javatra io, izay tamin'ny beta, dia nanomboka nihodina teo amin'ireo mpampiasa iOS sy Android.
Para mifanerasera amin'ny mpanampy Spotify Tsy maintsy tononinao ny teny hoe "Hey Spotify" (mety ho amin'ny Espaniôla dia hoe "Hey Spotify" fa tsy afaka nanamarina izany aho satria mbola tsy misy io asa io amin'ny fotoana namoahana ity lahatsoratra ity).
Ity asa ity dia tsy mandeha amin'ny laoniny, noho izany dia tsy maintsy idirantsika ny Fikirakirana ny rindranasa (amin'ny alàlan'ny fanindriana ny kodiarana eo an-jorony ambony amin'ny pejy lehibe), fidirana amin'ny fifandraisan'ny Feo ary ampandehano ny switch Hey Spotify / Hey Spotify, araka ny 9to5Mac.
Ity fiasa ity dia ankoatry ny efa nananan'ny mpampiasa ny kinova Spotify, asa izay mamela mikaroha mampiasa baiko am-peo ao amin'ny fampiharana. Ny maha samy hafa azy amin'ny mpanampy dia tsy mila mifandray amin'ny terminal isika.
Ny vaovao farany mifandraika amin'ny Spotify dia hita ao amin'ny Serivisy mozika avo lenta Hanomboka amin'ny faran'ity taona ity izy io, serivisy mbola tsy fantatsika hoe ohatrinona ny vidiny, saingy azo inoana fa hitovy amin'ny vidin'ny omen'i Tidal amin'izao fotoana izao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Manomboka tonga ao amin'ny iOS ny mpanampy virtoaly Spotify